570 online! | Sidvisningar idag: 169 037 | Igår: 185 081 |
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားယောက်ျားနှင့်မိန်းမအကြားဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုသည်။ ဒါဟာထောင်စုနှစ်မှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအတွက်သဘာဝနှင့်သိသာလာခဲ့သည်, သို့သော်ဤနိယာမပျက်ပြယ်ဖန်ဆင်းတစ်ခုသာနှစ်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်အကြိမ်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည်လူနှင့်မိန်းမ, ကိုယ်တော်တဘက်၌ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်ပုန်ကန်မှုအဖြစ်ရှုမြင်သည်ဤသွယ်ဝိုက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုအကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းငှါခန့်ထားတော်မူပြီ။ အကြောင်းမူကား, ဒါဟာအချို့သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်မပါဘဲတစ်ဦးဘုရားသခင့ထုံးစံမပြောင်းပါဘူး။
အိမ်ထောင်ရေးလိင်တူချင်းပေါင်းသင်းမှုအဓိပ်ပာဘယ်မှာတည်းသာ, သမိုင်းအတွက်ခြွင်းချက်တို့သည်သက်သေခံခြင်းရှိ၏။ ဗာဗုလုန် Talmud အတွက် data တွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရှင်ဘုရား Aryeh Spero သည်ဤ Talmudic စာသားထဲမှာသတင်းအချက်အလက်များ, "ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမပြုမီ, လူတွေလူတို့၏စပ်ကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားကန်ထရိုက်များရေးသားဖို့စတင်ခဲ့" ကွောငျးဖျောပွသော။ ပြောပါတယ်
ဒီအဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အခါအချိန်ကိုနောဧရဲ့နေ့ရလှေမျးမိုး်ရှေ့တော်၌ဤသို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါသူတို့က, အရှင်, အမည်ရ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏ပြည်ထောင်စုဘုရားသခင့နေသူများကဖန်တီးသောပထမဦးဆုံးအဖွဲ့အစည်း၏ပျက်ပြီခဲ့သည်။
"ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးသည်မြင်လျက်, လူအပေါင်းတို့သည်မြေကြီးကိုပုပ်ပျက်သောကြောင့်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, က, ပုပ်စပ်လျက်ရှိ၏။ " 1 ထှကျမွောကျရာ။ 6:12 ။
"ဒါပေမဲ့နောဧလက်ထက်၌ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ထိုနည်းတူလူသားကိုလာမယ့်ရကြလိမ့်မည်။ လူဦးနောဧသည်သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်. သောနေ့မရောက်မှီ, ရေလွှမ်းမိုးသောသူတို့စားသောက်, လက်ထပ်နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ပေးကမ်းခဲ့ကြဖြစ်မှီကာလ၌နေထိုင်ခဲ့သကဲ့သို့၎င်း, နှင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သဖြင့်လူအပေါငျးတို့ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်တိုင်အောင်အသူတို့သည်အဘယ်မျှမဟုတ်သိသည် - ဒါဖြစ်သားတော်ကိုကြွလာရကြလိမ့်မည် "။
မ။ 24: 37-39 ။
ယရှေုသညျထို့နောက်သူကပြန်လာကြလိမ့်မည်သည့်အခါအချိန်နှင့်အတူ, နောဧနေထိုင်ခဲ့သောအချိန်ကိုနှိုင်းယှဉ်။ အဲဒီမှာသူတို့အရက်စွဲများအကြားတစ်မူထူးခြားသောတူညီကြောင်းနှင့်ထိုသို့လိင်တူချင်းဆက်ဆံရေးတရားဝင်ကြောင်းသာအချိန်ကြောင်းပါ!
ဘုရားသခင့ငှါခန့်ထားအိမ်ထောင်ရေးကိုဖျက်ဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမိတ်ဖက်အဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ကိုရန်ဤရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်, အိမ်ထောင်ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။
ဤအခြေအနေတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအပိုဆောင်းဒေသများရှိပါသည်။ ယခုအခါကျားမ identity ကိုချေမှုန်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့စတင်ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်တစ်ခု expression ကို "ကြက်မ", "သူက" ကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟူသောစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် "သူမ" ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင့လူသားကိုဖန်ဆင်းသောနှစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံဘို့, ဒီစိတ်ကူးနှင့်ဤရှုပ်ထွေး expression ကိုလက်ခံရန်ဘယ်တော့မှ:
; "ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ။ ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုနေသူများကဖန်တီးဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာမိမိပုံရိပ်ကိုအတွက်လူကိုဖန်ဆင်းဒီတော့" 1 ထှကျမွောကျရာ။ 1:27 ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အမိန့်ယခုတို့သည်တုန်လှုပ်သည်အဘယ်မှာရှိမီးမောင်းထိုးပြချင်သောအခြားဧရိယာလည​​်းရှိ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမြှောက်သိသာခဲ့တာ၌ရှိသကဲ့သို့၏ထင် - ကအဘွားတတ်သောမိန်းမဖြစ်၏။ ဤသည်ကိုပြောင်းလဲနှင့်ပုံပျက်ပန်းပျက်, ကကံကိုမယုံနိုငျသူတယောက်မျှမရှိ, ဒါပေမဲ့ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌, တကအချက်ဖြစ်ပါသည်နိုင်မည်။
ဤသည် ပို. ပို. အဖြစ်များဖြစ်သည့်လိင်ပြောင်းလဲမှု, မှတစ်ဆင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးသည်လူဖြစ်လာမယ့်လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်မှုခံယူဖို့ရွေးချယ်သည်, သူ-သူ, ဤသို့နေဆဲကလေးငယ်များသည်းခံခြင်း၏နိုင်စွမ်းသူမက-သူ, သူမ၏သားအိမ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိမ့်မယ်။ လာသောအခါ
ဤနည်းလမ်းအတွက်, သင် "လူကို" သားသမီးရှိသည်နိုင်ဆိုလိုတာကတစ်တတိယလိင်, ဖန်ဆင်း၏။ အများစုကက "လူ" ပိုးမွှားသတ်သဘာဝဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြီးတော့ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်သိသိသာသာတစ်ဦးအော်ဟစ်ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်သဘာဝကိုသဘာဝနဲ့အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်အခါဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျဖြစ်လာသည့်အခါ "ဟုသူကပြောသည်မိန်းမ," ငါသည်သင်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအများကြီးဖြစ်စေမည်။ ဒါပေမယ့်နာကျင်မှုသင်သားဘွားရလိမ့်မည်။ "1 ထှကျမွောကျရာ။ 3:16 ။
သာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကအပြိုပျက်ခဲ့ပုံကိုမွငျနှငျ့ဘုရားသခငျရှေ့ဦးစွာ မှစ. စတင်တည်ထောင်ရသောအမိန့်ကိုပြောင်းလဲကြပြီ။ ဤသူသည်သင်တို့သူဟာစီရင်ဆုံးဖြတ်သောအရာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး, ဘုရားသခင်သည်ထိုသို့သောဆန့်ကျင်တဲ့ပုန်ကန်မှုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာအကျိုးဆက်များရှိသည်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါတရားသဖြင့်စီရင်နောဧရဲ့အချိန် လာ. သူတို့ကဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်မယ်လို့မယုံကြည်ချင်တယ်။ အခုတောင်မှသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသူတို့လိမ့်မည်ယုံကြည်ရန်ချင်တယ်။ ကြီးစွာသောဒုက္ခတရားသဖြင့်စီရင်လုပ်ရပ်များမြေကြီးပေါ်မှာသှားသောအခါနှောင်းပိုင်းတွင်တဦးတည်း, ဤဘယ်လောက်မှားယွင်းနေဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရှလိမ့်မည်။ အဆိုပါအချိန်မကြုံစဖူးသည်: ယရှေုသညျ, Matt အတွက်အဘယ်သို့မိန့်ကိုဖတ်ပါ။ 24:21 ။
ပြောင်းပြန်အခြေအနေနှင့်သူတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်တဘက်၌သူတို့ပုန်ကန်မှုကနေမိမိတို့ဘုရား၌ကမ္ဘာဖျံ, ဒီ domstid တွေ့လိမ့်မည်အဖြစ်ယေရှုရဲ့စကားဖြစ်ကြ၏။ နှောင်းပိုင်းတွင်တူညီသောလမ်းအတွက်, နောက်ဆုံးသောအချိန်အတွက်အများအပြားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသို့ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးလာသောအခါနှောင်းပိုင်း၏လေးနက်မှုကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့, လူများနောဧ၏လေးနက်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒီအ doomsayers ဖြစ်ရန်မလမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရေးသားခြင်း, ကသာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏သောအမှုအရာကိုအလေးပေးပြောကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးပြားသွန်သင်ချက်တွေကိုနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလလက္ခဏာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်ယခုရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်နေ့ရက်ကာလကိုအဆုံးသတ်နှင့်သင်သည်ဘုရားသခင်မပါဘဲတယောက်တည်းရပ်နေကြရှေ့တော်၌, နောင်တရနှငျ့ဘုရားသခငျမှဖွင့်ဖို့အချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဘုရားသခင်သည်လူအတွေးသူ၏ကန့်သတ်လောကရှိနှင့်၎င်းတို့၏ egoism နှင့်မာနထောင်လွှားအတွက်သွားကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဆိုပါငြင်းပယ်သောနေ့၌အဘယ်သူမျှမတနျဖိုးရှိသညျ။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများသည် - အပိုင်း 1 - Holger Nilsson
ဒီတော့ဝေးဒီနှစ်ဆွီဒင် 44 ဆိုးဝါးပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါပြီ။ 43 သေလွန်သောသူတို့သည်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနေစံချိန်စစ်တိုက်ခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
by Mikael Walfridsson ကပ်ကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလေ့လာခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့အနာဂတ်ပြီးဆုံးမှာနေထိုင်ကြောင်း, အကြောင်းကိုအချို့သောနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့တှငျနထေိုငျသောအချိန်ကာလကိုသိနှင့်ခံစားရရန်အဘို့အအရေးကွီးသောဇာတ်ကောင်ကဘာလဲ?
AI အ - တုထောက်လှမ်းရေး - 2000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင
ဒါဟာယခု breakneck မြန်နှုန်းမှာဖြစ်ပျက်နေသည် AI အ, တုထောက်လှမ်းရေး (အတုထောက်လှမ်းရေး), နှင့်ပြီးသားစက်ရုပ်စကားပြောနှင့်စဉ်းစားတီထွင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတွှေဖို့မရေးသားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က 2000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသမ်မာကမျြးနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေပါပြီဟောကိန်းထုတ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအချိန်ညွှန်ပြခွင့်ရှိသည်မည်မျှနားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းငှါ,
မနေ့ကမူအရအခမဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဘို့မိမိတို့နယ်နိမိတ်ဖွင့်လှစ်သောကုလသမဂ္ဂလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Pact အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နိုဘယ်လ်ပွဲအဖြစ်မီဒီယာဆူညံသံအတွက်သမိုင်းကြောင်းအပြင်းထန်ကုလစာချုပ်ပျောက်ကွယ်သွားမနေ့ကစွာတည်လေ၏။
ဤသည်တွေများအသံစခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်ဒီကြှနျုပျတို့သညျဤရူပါရုံကိုနှင့်ကျမ်းစာထဲမှာအကြောင်းကိုဖတ်ပါအဆိုပါဇာတ်ကောင်အင်အားအကောင်းဆုံးခေတ်ပြိုင်အချိန်ဖြစ်တယ်, ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြန်အချိန်ပိုင်ခွင့်ရမည်,
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် ဒါဝိဒ်သည်ခ ခြော, လူအုပ်အော်ဟစ်: လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါလက်ဝါးကပ်တိုင်ယေရှု၏နောက်လိုက်များနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သညျယရှေုကိုဆိုလိုတာပါ။ သူတို့ဟာပြီးတော့သူတို့ခြေအတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးနေကြပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးသူ့အကြောင်းပြချက်ကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
Christer Åbergအချို့လိမ်းသတင်းမှတဆင့်တတ်၏။ သင်တို့သည်ဤသတင်းအချို့ကိုယူတဲ့အခါမှာကျနော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလ၌နေထိုင်နေကြကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
Holger Nilsson အားဖြင့်
"ဆွီဒင်ဖြစ်ကောင်းသုံးနှစ်မှငါးနှစ်အတွင်းအတွင်း '' cashless '' ဖြစ်လိမ့်မည်", လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်း conference မှာဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Cecilia Skingsley ကဆိုသည်။
ကျနော်တို့ကယေရှုရဲ့ဒုတိယကပထမ, မလာမယ့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ နှင့်ဤဆိုက်ရောက်ရှည်လျားသောအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ယရှေုသညျကြိုးပြန်ကြွလာသောအခါ, သူကသူသညျ လာ. သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူရပါလိမ့်မယ်။ သင်ကဘာမှအဘို့ဖွစျနိုငျသလဲသိလား
Kalvanistpstorn သင်းအုပ်ဆရာယောဟနျသ Loopez ဤအယူဝါဒသည်မည်မျှမှားယွင်းသောကြည့်ရှုရန်သခင်ဘုရားကပေးတဲ့ခဲ့ကြသည်။
Alaska အတွက်ငလျင် - သညျယရှေုပရောဖက်ပြုစစ်မှန်
alaska နှစ်ခုအလွန်အားကောင်းတဲ့ငလျင်ဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဘေးဥပဒ်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြေညာထားပါတယ်သည့်အခါကောင်းစွာတတ်၏။ ယရှေုသညျဖွစျပျေါဖို့ကြီးမားတဲ့ငလျင်၏ဟောပြောလော့။ hit တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘို့ဆုတောင်းကြလော့ကြပါစို့။
သူမသည်တစ်ဦး chandelier နှင့်အတူပါဝင်နေသည်
မန် Liberty သူမတစ်ဦး chandelier မှပါဝင်နေသည် "နမ်းခြင်းနှင့်အတူပုခက်လွှဲဖို့ချစ်တော်မူ၏။ "
Vecka 50, lördag 15 december 2018 kl. 20:33
ထို့နောက်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျအဝေးရောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကြောင့်ငါ၏ကိုယ်နှင့်ငါ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအန္တရာယ်ရှိရာပိုပြီးလေးနက်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ခဲ့သည်။ Neo-နာဇီကနေအသေသတ်ခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်မှုများငါထမတ်တပ်ရပ်နှင့်ဒုက္ခသည်များကိုဝှကျထား, ထိုချည်ရန်အလွန်နီးကပ်နှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိစ္စများတွင်မှတဆင့်သည်မှောင်မိုက် sexkriminalitetens, besvärjdနှင့် occultists ၏ဝိညာဉျရေးရာ duel ဖို့စိန်ခေါ်လို့ပဲ။
69 နှစ်အရွယ် 49 မှအသက်ပြောင်းလဲသွားချင်
နယ်သာလန်အတွက် 69 နှစ်အရွယ် Emile Ratelband 49 နှစ်ကြာသူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာအသက်အရွယ်ခက်ရချင်တယ်။
"ယေရှုခရစ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏ 27 နှစ်မှအကြƟ
သူကလိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏ 27 နှစ်သားယရှေုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြတယ်မည်သို့ဒါဝိဒ်၏အားကြီးသောသက်သေခံချက်။ ဆွီဒင်ကစာသား။
- ငါ့နာမကိုဒါဝိဒ်သည်က, ငါ 44 နှစ်ရှိပြီဖြစ်၏, ဤသညျယရှေုလိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏နှစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်မှငါ့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့မည်သို့သက်သေဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာဟောပြောလော့။
"ကိုချစ်ဖို့ဂုဏ်အသရေတောင်းဆိုနှငျ့ဘုရားသခငျကိုကိုးကှယျသောသူတို့သည်, ဂုဏ်အသရေကိုးကွယ်သညျယရှေုကိုချစ်မတကယ်တော့မကျင့်။ "
သူ hologram Hatsune Miku လက်ထပ်
Akihiko Kondo သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့သူ hologram Hatsune Miku တစ်ရုပ်သေးဗားရှင်းကိုင်ဆောင်။ Image ကိုရင်းမြစ်: Facebook က။
ဂျပန်တွင်တစ်ဦးကအသက် 35 နှစ်အရွယ်လူတဦး hologrom လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမင်္ဂလာဆောင် 160,000 သရဖူကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကိုယ်စားပြုတစ်ဦးကအရုပ်။
ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 Uppsala အတွက်သန့်ရှင်းစေ
တီဗီထုတ်လုပ်သူရုဗင် Agnarsson, တည်ထောင်သူနှင့်သမ္မတ Martti Ojares, ရုပ်သံလိုင်းမန်နေဂျာ Daniela Persin နှင့် Christer Åberg။
ငါ Uppsala အတွက်ခရစ်ယာန်ရုပ်သံလိုင်းကောင်းကင်ဘုံ TV7 ရဲ့စတူဒီယိုဖွင့်လှစ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
ရှိသမျှသောလောကီလူများသညျယရှေုသုံးဆကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲဘုရားသခငျ့ဆုကြေးဇူးကို။ ယရှေုခရသူ၏အပြစ်ဖြေရာမှတဆင့်ပြုထားတဲ့မကြုံစဖူး Triple အောင်ပွဲခံခဲ့သညျ! စိတ်ဝိညာဉ်ကမ္ဘာကအနိုင်ရရမယ်: အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌သူအဓိပတိတရားသူကြီးနှင့်မတိုင်မီ3ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများဖြစ်ခဲ့သည်။
သငျသညျကမျြးစာကိုဖတျရှုလျှင်, သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြေကြီးပတ်ပတ်လည်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ မြေကြီးတပြင်ပတ်ပတ်လည်မပါလျှင်သူကကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နေ့ညဉ့်မပြတ်နှစ်ဦးစလုံးကပြောပါတယ်သည့်အခါထို့နောက်ယေရှုသည်အပေါငျးတို့သညျကောငျးကငျဘုံသိမ်းဆည်းအိမ်ပြန်စေသောအခါ, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မှားယူကြပြီမယ်။
နယူး DVD ကို! အဆုံးအဆနှင့်၎င်း၏ဖြစ်ရပ်များ
သငျသညျယခုအဆုံးအချိန်ဖြစ်ရပ်များအကြောင်းကိုအခုအသစ် DVD ကိုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 502 733 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 059 bloggartiklar, 92 306 kommentarer och 60 506 bönämnen.